POS System, POS Machine, POS kwiRejista Cash, yebhakhowudi Printer, Receipt Printer - Aokia
Electronic Register Cash
Isiliphu Paper Roll
yebhakhowudi Label Sticker
yini ukhethe aokia
Aokia usoloko ukholelwa amaxabiso akunguye yonke kwishishini, siya endaweni win-win ngobuhlobo ehlabathini lonke.
Thina yokugcwalisa amaxabiso nge nokuhlola iimarike, amaxabiso afanelekileyo kukunceda zombini. Aokia kuyinto brand odumileyo kunye
nomgangatho kusesona, siya ukulawula kwinqanaba ngalinye ukuhlangabezana nemigangatho yobulunga. Onke amalungu Aokia lisithathe
abathengi njengamalungu entsapho, iqela lethu inkonzo lwabathengi ukunika inkxaso eyiyo isisombululo imibuzo.
58mm Mobile Handheld Receipt Yomshicileli
Coloured Sticker Thermal
Mini ngqo Thermal barcode Yomshicileli
Ukungenisa machine POS entsha
Restaurant and bha abaqhubi ezijongene noxanduva ezimbaxa kunye nenjongo ezibalulekileyo ezifana kwindawo yentengiso, inkqubo yentlawulo, ulawulo inventri, izimali, yokulandelela umxhasi, ulawulo yabasebenzi, ki ...
wabelane iphupha lakho Aokia
Bhalisa iphephandaba lethu
Siya kuthumela kuni iindaba ezibalulekileyo inzuzo iposi yakho. Masisoloko sifumaneka. Enkosi.
* Prince: Nceda ukhethe i House